14 November – Maalinta Caalamiga ee Cudurka Macaanka. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / 14 November – Maalinta Caalamiga ee Cudurka Macaanka.
Muqdisho – Maalinta Caalamiga ee cudurka Macaanka waxaa loo dabaal-degaa 14-ka November oo ah markii uu dhashay Frederick Banting, oo shaqadii uu la qabtay Charles Best ay suura-geliyay daahfurka insuliinta sanadkii 1921-kii. Maalintan waxaa markii ugu horreysay la hindisay sanadkii 1991-kii si looga fal-celiyo halista cuurka Macaanku ku hayo caafimaadka ina Aadan. Si kastaba, Maalintan waxay rasmi ahaan u noqotay mid kamid ah maalmaha caalamiga ah ee QM sanadkii 2006-da.
Hal-ku-dhegga sanadkan ee Maalinta Caalamiga ee Macaanka waa Haweenka iyo Sokorowga – xaqa aan u leenahay mustaqal caafimaad leh.
Waxaa jira haween lagu qiyaaso 199 milyan oo la nool cudurka Macaanka. Laba kasta oo kamid ah shantii haween ee qaba cudurka Macaanka waxay ku jiraan da’da dhalmada taas oo tiro ahaan lagu qiyaaso inay dhan yihiin in ka badan 60 milyan.
Macaanku waa sababta 9aad ee dhimashada dumarweynaha caalamka oo 2.1 milyan ay sanad kasta u geeriyoodaan. Hal kamid ah 7-dii dhallaan ee la dhalo, wuxuu qabaa Sokorowga.
Tirada dadka qaba Macaanka waxay sare u kacay afar jibbaar taniyo sanadkii 1980-kii. Caadi ahaanshihiisu wuxuu noqonayaa mid dunida kusii fidaya gaar ahaan dalalka ku nool dakhliga hooseeya. Sababaha loo tiiriyo cudurka dhalashadiisa waa dhowr, hayeeshe sare u kiciisa waxaa qeyb ahaan loo celiyaa dadka aadka u cuslaada – xagga hilibka – sida cayilka ama baruurta iyo la’aanta howl-jireed joogto ah.
Duni ahaan, tiro lagu qiyaasay 422 milyan oo qof ayaa qaba cudurka Macaanka ama Sokorowga. 30-kii sano ee lasoo dhaafayna wuxuu ku jiray xawli muuqda. Waana mid kamid ah sababaha dhimashada insaanka. Sanadkii 2012-ka oo kaliya, Macaanku waxaa sababtiisa iilka ugu hoyday 1.5 milyan oo qof.
Dadka qaba Macaanka waxay muddo dheer ku noolaan karaan nolol caafimaad leh marka sokortooda la ilaaliyo: loona maareeyo si habaysan. Hayeeshe waa calaamaha ugu horreeya iyo sida loola fal-galo midda bilowga u ah in si caafimaad leh loola noolaado Macaanka ama Sokorowga.
Dadka ugu badan ee cudurka Macaanka u dhinta waxay ku nool yihiin dalalka dakhli ahaan hooseeya. La’aanta daryeelka aas’aasiga ah oo badi aysan heli karin bukaannada cudurka ee ku nool dalalka soo koraya ayaa sababtay inay la tacaali waayaan. Waxaa xadidan qalabyada casriga ah ee loo adeegsado dabiibitaanka dadka qaba.
Nasiib-darro, Macaanku wuxuu sabab muhiim ah u yahay indha la’aanta, goynta xubnaha ama laxaadka qofka sida addimada iyo gacmaha iyo xanuunka ku dhaca kelyaha. Meelaha kale ee suura-galka ah inuu wax-yeelo waa garaaca wadnaha.
Balse cudurkan waa mid laga hortagi karo. Joogteynta howl-jireedka iyo cunista cunnooyinka isku dheelli-tiran waxay yaraynta halisteeda.
Previous: Borussia Dortmund oo kusoo biirtay loolanka loogu jiro Emre Can
Next: Qaraxii 14-ka October –Bil kadib Xusuusta Maanta!